Fanasitranana ireo toetra ampongabendanitra: voankazo misy kaloria ambany | Nutri Diet
PaÃ¼ Heidemeyer | | soso-kevitra, Vatsim-pivelomana, sakafo, fahasalamana
Ny ampongabendanitra, izany hoe voankazo ampongabendanitra, miseho amin'ny fararano volana ary mitohy hatramin'ny vanim-potoana ririnina. Mahamenatra izany voankazo vanim-potoana toy izany satria afaka mandany azy amin'ny fotoana iray ihany isika. Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao mba hitiavanao bebe kokoa ny ampongabendanitra ary amin'ny manaraka dia hitanao eo amin'ny tsenanao izany. aza misalasala vetivety raha haka vitsivitsy amin'ny iray amin'ireo voankazo misy atiny misy antioxidant avo indrindra ao. Ny fanjifana azy dia tena atoro anao raha jerena ny habetsahan'ny fanasitranana fananana inona no olana amin'izany.
Avy amin'ny Fiandohana aziatika ary tamin'ny andro taloha dia nampihena ny tazo ny marary. Androany dia aondrana any amin'ny faritra rehetra amin'ny planeta izy, na dia mbola misy aza ny kaontinanta aziatika izay laniana indrindra. Tianay holazaina aminao ny lanjan'ny biolojika, ny toetra mampiavaka ny fanafody sy ny tombony azo avy aminy. Ny fampahalalana fototra sy ilaina an'io voankazo mahafinaritra io.
1 Ny ampongabendanitra toy ny voankazo, matavy ve?
2 Tombontsoa ampongabendanitra
3 Toetran'ny ampongabendanitra mikarakara ny vatanao
3.1 Halaviro ny fiakaran'ny tosidra
3.2 Ny voajanahary voajanahary
3.3 Mampihena ny kolesterola amin'ny ra
3.4 Miady amin'ny aretina sy ny holatra
3.5 Ampitomboy ny zava-bitanay ara-batana
3.6 Mampihena ny fisehoan'ny homamiadana
3.7 Mampitombo ny fananganana lehilahy
3.8 Manakana ny fiandohan'ny Alzheimer
3.9 Toetra fanasitranana hafa
Ny ampongabendanitra toy ny voankazo, matavy ve?
Ny ampongabendanitra dia manome antsika angovo sy fahavelomana betsaka, ny tsirony no mahatonga antsika hahatsapa ho tsara sy manome antsika fihetsem-po miaboNoho io antony io dia asaina mihinana isika raha mandalo fotoan-tsarotra. Ho fanampin'izany, ny fampiasana azy dia asaina amin'ny sakafo fihinan-danja, noho ny fatran'ny kaloria ambany.
Ny ampongabendanitra dia mipoitra avy amin'ny ampongabendanitra, hazo kely iray an'ny fianakavian'i Lythraceae. Ny haben'ny grenady dia mety hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 12 santimetatra ny savaivony. Ny ampongabendanitra dia misy hodi-kazo mavo mavo mena, raha ny ao anatiny kosa dia voahangy mena lalina.
Ireo varimbazaha ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe arila ary izy ireo no manana sy manome vitamina, mineraly ary fananana rehetra ho hitantsika etsy ambany.
Manodidina, ny ampongabendanitra dia manome antsika ireto soatoavina manaraka ireto, maka tahaka ohatra grenady 10 santimetatra.
Proteinina: 4,7 gr.
Fiber: 11,3 gr.
Vitamina K: 58% amin'ny RDA.
Vitamina C: 48% amin'ny RDA.
Folate: 27% amin'ny RDA.
Potasioma: 19% amin'ny RDA.
Ny ampongabendanitra dia iray amin'ireo voankazo omena anaram-bosotra fanafody, ary izany dia mitranga noho ny zavatra roa hita ao aminy:
Punicalaginas: antioxidants mahery vaika izay hita ao anaty hodi-kazo. Mba hahafahana mankafy azy ireo dia tsara ny mihinana ranom-ampongabendanitra.
Asidra Punika: Ity asidra ity dia linoleika, azo avy amin'ny perla na voan'ny ampongabendanitra.
Toetran'ny ampongabendanitra mikarakara ny vatanao
Halaviro ny fiakaran'ny tosidra
Hita ny porofo ara-tsiansa izay nanehoana fa mihinana ranom-ampongabendanitra manampy amin'ny fihazonana tosidra salama.
Tena ilaina indrindra ho an'izay rehetra mijaly noho ny fiakaran'ny tosidrà ny fisotroany ranon'ampongabendanitra mandritra ny herinandro vitsivitsy, mba ho hitan'izy ireo manokana ny fomba hanatsarana ny fahasalamany amin'ity fihetsika kely ity.
Ireo punicalagins voalaza etsy ambony, dia tompon'andraikitra amin'ny fisorohana ny fivontosan'ny vatana, ka hialana amin'izany aretina toy ny diabeta, Alzheimer, aretim-po na karazana homamiadana sasany.
Ny vokany manohitra ny inflammatoire dia mampihena tsara an'io fivontosana io, indrindra indrindra mamaivay ao amin'ny rafi-pandevonan-kanina, ka mampihena ny mariky ny Proteinina C-reactive sy interleukin-6.
Etsy ankilany, io hatsaram-panahy miady amin'ny inflammatoire io dia mahatonga azy hisoroka vanin-taolana sy ny osteoporosis, ny taolantsika dia handray soa raha mihinana io voankazo io tsy tapaka isika.
Mampihena ny kolesterola amin'ny ra
Amin'ny lafiny iray, ny asidra punika, miady amin'ny aretim-po izay miteraka tsy fahazoana aina amin'ny aretim-po.
Ohatra iray amin'izany ny manampy amin'ny fampihenana ny kolesterola ratsy sy ny trigliseridida hita ao amin'ny rantsika, ny fihinanana ranom-ampongabendanitra.
Ankoatr'izay, tsy vitan'ny mampihena ny ratsy fotsiny izany fa mampitombo ny kolesterola tsara.
Miady amin'ny aretina sy ny holatra
Ny ampongabendanitra dia fanafody voajanahary tsara hanala ny holatra sy bakteria manafika ny vatana. Manana fananana anti-bakteria sy antifungaly, arak'izany dia miaro antsika amin'ny aretina toy ny candida albicans, bakteria am-bava izay mahatonga antsika hanainta ao am-bava na hanatsara ny gingivite.
Ampitomboy ny zava-bitanay ara-batana
Ny ampongabendanitra dia manome angovo sy hery be ho an'ny vatana. Angovo tifitra izay tsy jeren'ny olona. Manjifa ny ampongabendanitra 30 minitra alohan'ny fotoam-panazaran-tena ataontsika dia manampy ny fikorianan'ny rà ho lasa tsara kokoa.
Manatsara ny fivezivezena sy ny fitaterana oksizenina ny nitroka.
Mampihena ny fisehoan'ny homamiadana
Manam-pahaizana maro no mahatsapa fa ny ampongabendanitra dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fahasalaman'ireo izay mihinana azy. Mitrandraka ampongabendanitra na ranom-boankazo Mety hahasoa amin'ny fitsaboana kanseran'ny prostatya, ary koa ny fisorohana ny fahafatesan'ny sela. Manakana ny sela homamiadana tsy hamokatra izany ary hiteraka fahafatesan'izy ireo.
Mampitombo ny fananganana lehilahy
Ny ranom-ampongabendanitra dia nampifandraisina tamin'ny fihenan'ny soritr'aretina vokatry ny tsy fetezan'ny erectile. Ny fikarohana dia milaza fa mety manana ilay ampongabendanitra vokany tsara amin'ny fikorianan'ny rà amin'ny faritra maha-lahy na vavy, fanalavirana izany loza izany.
ihany koa, mampitombo ny libido sy ny filan'ny nofo.
Manakana ny fiandohan'ny Alzheimer
Manatsara ny fitadidiana amin'ny tranga maro izy io ary hita fa amin'ny zokiolona mihinana ampongabendanitra betsaka dia manampy azy ireo hampitombo ny fahafahany mitadidy. Izany dia afaka misoroka ny fihenan'ny ati-doha ary afaka manalavitra ny Alzheimer.
Toetra fanasitranana hafa
Manatanjaka ny taolantsika ary manatsara ny kalitaon'ny hozantsika.
Izy io dia tsara ho an'ny diabeta satria manampy amin'ny fampiakarana tsara ny haavony.
Sorohy ny adin-tsaina sy fanahiana.
Izy io dia misoroka ny fivalanana ary koa manakana antsika tsy ho voafinty.
Raha asiana topically dia manatsara ny kalitaon'ny hoditsika izany. Manampy amin'ny fanasitranana, fisorohana ny ketrona ary manatsara ny tsy fahatomombanana.
Manafoana ny katsentsitra tsinay.
Izy io dia voankazo diuretic, manakana antsika tsy hivonto ny kitrokely.
Izy io dia antioxidant noho izany mampihena ny fahanteran'ny sela sasany amin'ny vatana.
Araka ny hitanao izao, ny grenady tsy mamy fotsiny isika ho tsindrin-tsakafo aorian'ny sakafo mahafinaritra, fa koa manampy antsika hanatsara ny fahasalamantsika.
Aza misalasala mividy ampongabendanitra amin'ny vanim-potoana manaraka, isaky ny manaikitra tadidinao ny anao fananana sy tombontsoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Fanasitranana ny toetra ampongabendanitra: voankazo misy kaloria ambany
Fiarovana amin'ny sambo dia hoy izy:
Matetika aho no mihinana iray na roa mandritra ny sakafo hariva. Inona avy ireo kaloria nohaniko?
Valio ny chip Amparo